Xukuumadda Somaliland Oo Si Farxad Leh U Soo Dhawaysay Qorshaha Dawladda Uganda – somalilandtoday.com
Xukuumadda Somaliland Oo Si Farxad Leh U Soo Dhawaysay Qorshaha Dawladda Uganda
(SLT-Hargeysa)-Dawladda Somaliland ayaa si farxad leh u soo dhawaysay qorshaha dawladda Uganda ee ah in diyaaradda dawladda Uganda duulimaadyo ka bilawdo magaalada Hargeysa.
Todobaadkan ayay shirkadda diyaaradaha ee Uganda shaacisay in ay magaalada Hargeysa ka mid tahay dalal iyo magaalooyin ay shirkaddu duulimaadyo cusub ka bilaabi doonto.
“Warkan weyni kaliya muhiim uma aha Somaliland ee Bariga Afrika oo dhan ayuu muhiim u yahay. waanu sugi kari la nahay duulimaadkii u horeeyay ee Uganda Airline ku soo fadhiisanayso madaarka Hargeysa,” Sidaas ayuu yidhi masuul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo wargeyska Busiweek soo xigtay.
Waxa uu intaasi ku daray in ay ahmiyad weyn u leedahay Somaliland, Uganda iyo gobolkaba isku xidhnaanta garoomada Cigaal iyo Entebe, islamarkaana kor u qaadayso ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyada u dhexeeya Hargeysa iyo Kambala.
Geesta kale Busiweek ayaa ku warramaya in koox ka socota shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways yimaaddeen madaarka Hargeysa si ay u eegaan xaaladdiisa taas oo hor dhac u ah damaca shirkaddu duulimaadyo kaga bilaabayso.
Wakiilka Somaliland u fadhiya Nairobi Baashe Cawil ayaa sheegay in ay jiraan ganacsato u kala goosha Hargeysa iyo Nairobi, islamarkaana ay muhiim tahay in Kenya Airways duulimaad ka bilawdo Hargeysa.